I-NDR yaseJamani idibanisa iStudioDirector ye-CGI ye-Studio entsha eHamburg | I-NAB bonisa iindaba | I-2.0 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » I-NDR yaseJamani idibanisa i-CGI's StudioDirector 2.0 ye Studio entsha eHamburg
Isisombululo esitsha isebenzise istudiyo esitsha se-NDR njengegumbi lolawulo losasazo elixhaswa ngokuzenzekelayo
CGI, umboneleli ngenkqubo yegumbi lokuhambisa iindaba eYurophu uyonwabile ukubhengeza ukuba i-Norddeutscher Rundfunk (NDR) yaseJamani, ilungu leqela le-ARD, idibanise i-StudioDirector 2.0 kwindawo yayo ye-OpenMedia kwigumbi leendaba lendalo.
Usasazo lukawonkewonke kunye nomsasazi kamabonwakude u-NDR usasaza amazwe aseJamani eSaxony, Mecklenburg-Vorpommern, eSchleswig-Holstein naseHamburg, kwaye waba ngowokuqala ukuba ngumthengi weCGI (ngelo xesha uAnnova) ngaphezulu kweminyaka eli-15 eyadlulayo xa waphumeza inkqubo yegumbi leendaba le-OpenMedia abasebenzi bayo bemveliso yeendaba. Ukusetyenziswa kweStudioDirector 2.0 evela kwi-CGI kulandela intshukumo yeqhinga le-NDR yokusebenzisa istudiyo sayo esitsha se-NDR1 njengegumbi lolawulo lokusasaza elixhaswayo lokuzenzekelayo ukuvelisa ifomathi yemagazini yommandla "iHamburg Journal" kunye nefomathi yeendaba "NDR-Info".
Xa amabali enziwe kwasekuqaleni aqala ngokungafakwanga khowudi kwaye ke kufuneka umsebenzi owongezelelweyo ngaphambi kokuba baqhubeke ngokufanelekileyo kwinkqubo yokuzenzekelayo. Ukudityaniswa kweStudioDirector 2.0 kwi-NDR's inkqubo ekhoyo yegumbi leendaba lenza ukuba abahleli babo bajolise kumxholo nakwidrama yomboniso othintela umzabalazo ngemikhombandlela efunekayo okanye itemplate ezizenzekelayo okanye ukuhlengahlengisa uyilo olutsha lomboniso.
I-StudioDirector 2.0 ye-CGI ivumela imibutho yeendaba ukuba ikhuphele kwimisebenzi engamanyala kunye nokuphindaphinda njengokufaka i-automation MOS (imiyalelo yento yemithombo yeendaba) kunye nokuqinisekisa ukuba yonke imizobo efunekayo idityanisiwe okanye idityanisiwe ngaphambi kokuya emoyeni. Iintatheli kunye nabalawuli banokukhetha uyilo olunqwenelekayo lwesitudiyo samabali abo kumdlalo ovela kuluhlu oluchazwe kwangaphambili lweemodeli. Oku kukonyusa ukusebenza ngokukuko ngokukhulula ixesha elibalulekileyo lokuhlela kunye nokunciphisa ithuba leempazamo, ngakumbi xa kusenziwa ulungiso lomzuzu wokugqibela kumabali ahamba ngokukhawuleza.
Izibonelelo zeStudioDirector 2.0 kukuba zinomdla wokusebenzisa, yonke into iyenzekelayo kwaye isixhobo siyasebenzisana neenkqubo esele zisekwe kwi-IP. I-StudioDirector 2.0 idlala indima ebalulekileyo kunxibelelwano phakathi kwenkqubo yokuhlela kunye negumbi lokuzenzekelayo. Kumzamo odibeneyo nowakhayo phakathi kwe-NDR kunye ne-CGI, ngaphezulu nje kwesixhobo okanye into ebonakalayo eyenziweyo-ifilosofi entsha yendlela amaqela okuhlela kunye nabasebenzi bemveliso abenza ngayo ngokukuko inkqubo ngokutshintshiselana ngokuthe ngqo kunye nomnye. Ngofakelo olutsha lwe-StudioDirector 2.0 i-NDR ngoku inokusebenzisa amandla apheleleyo enkqubo yayo ye-OpenMedia kwisitudiyo nakwigalari, ebanceda ukuba bafikelele kwinqanaba elilandelayo losasazo-lwexesha elizayo.
Yasekwa ngonyaka we-1976, i-CGI iphakathi kweyona IT inkulu kunye neenkampani zokubonisana ngeshishini emhlabeni. Ukusebenza kumakhulu eendawo kwihlabathi liphela, i-CGI ihambisa iinkonzo zokugqibela kunye nezisombululo, kubandakanya i-IT yeqhinga kunye nokubonisana ngezoshishino, ukudityaniswa kweenkqubo, i-IT elawulwayo kunye neenkonzo zenkqubo yeshishini kunye nezisombululo zepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Ukudityaniswa kweCGI kunye ne-SCISYS Group PLC ngoDisemba 2019 kunye nobungcali obunzulu kumajelo eendaba nakwezosasazo, kunye nendawo kunye namacandelo okhuselo. IziCombululo zeMithombo yeendaba zeCGI, ezazisakuba zii-SCISYS Media Solutions, zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeendaba zobungcali kunye nezisombululo zokuhanjiswa komxholo kwiinkampani zemithombo yeendaba ezintsha kwiimarike zalapha ekhaya, kwilizwe nakwamanye amazwe. Oku kubandakanya inkqubo ekhokelayo yentengiso yegumbi lokufundwa le-OpenMedia kunye nesisombululo semveliso yerediyo, sisebenzela uninzi lwabadlali abaphambili kusasazo nasekuhanjisweni.
Ngolwazi olungakumbi, nceda u tyelele: www.cgi.com/mediasolutions
Previous: Umphathi weAkhawunti yokuSebenza kweDijithali
next: Isony Electronics Iphehlelela isongezo esitsha ku-G Master ™ Isakhelo seLens esipheleleyo seLightweight kunye neCompact 35mm F1.4 G Master ™